5 Izizathu Ukuze Hlola Europe ngu zemininingwane Ngo-December | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Izizathu Ukuze Hlola Europe ngu zemininingwane Ngo-December
(Kugcine ukubuyekezwa On: 06/12/2019)
Kunokuthile emangalisayo yokugcwalisa mayelana buthule nokubuka ukuphuma ngaphansi kwesimo ifasitela isitimela, awucabangi? Ngakho, bayakhohlwa frisks obuseduze yezokuphepha, Ziplock izikhwama ukusula uketshezi, zero ubumfihlo bese sikhwela ibhesi yangasese-kancane. Ayikho indlela engcono yokuhlola Europe kuka ngesitimela ngo-December. Nazi izizathu zethu ukuthi kungani!
1. Hlola Europe ngesitimela ngo-December uzobona – izivakashi ezimbalwa
Abantu abaningi bathutheleka izindawo athandwayo ngesikhathi sehlobo lapho befuna ukuhlola Europe. Nokho, sezulu libalele kuyayiletha nalo, abantu. Eziningi futhi abantu abaningi! Sithanda ukuhlola Europe ngesitimela ngoDisemba ngoba kukhona izivakashi nje okumbalwa. kwenkundla angeziwe, nokuzola, futhi isikhala ngawe!
2. Hlola Europe ngesitimela ku izindlela ebusika – amazinga Yalutho
Isizathu esenza sibe amazinga eshibhile ukuthi nje okucabanga 1! Bambalwa nakakhulu abantu kulingana konke eshibhile! Sizama ukuxoxa eshibhile amahhotela futhi amathikithi wesitimela emhlabathini (Nokho cishe hhayi emhlabeni Christmas /Unyaka omusha).
A tip: Izaphulelo zingatholakala ngaphezulu emadolobheni amancane engaphansi kakhulu kwezokuvakasha. Kunjalo, emadolobheni ezinkulu akudingeki uzame njengoba kunzima ukuthola kule amakhasimende, ngakho ukuhlela ngokuhlakanipha uma wenza ibhajethi!
Marseille eParis Izitimela
3. Izimakethe kanye nemikhosi
Hlola okuthunyelwe wethu ujabulise ku The Best Winter Imikhosi eYurophu uma zokufuna ulwazi oluthe xaxa ngamapiki zethu phezulu. Street Izimakethe, ngokuqondile baqiniseka yonke indawo ngoDisemba. Empeleni, kuye kwaba isiko Disemba kusukela ngawo-1400! Ukuba kwi isitimela kusho ukushintsha-shintsha, ngakho kufanele unqume ukuthi wena umane kufanele uhlale isikhathi eside endaweni eyodwa uthola umthanda ngempela, ke unga! Lobo ubuhle ikhambo isitimela. Yingakho kungekho Indlela engcono yokuhlola Europe kuka ngesitimela ngo-December.
Uma uke wabukela ifilimu Christmas, kukhona nakanjani isithombe imilingo ngesineke umkhathi. Isithombe kancane falling amakhekheba eqhwa, izingane uphonsa weqhwa, icicles, ukungqubuzana kwezingqimba ezinkulu ephansi ukuhamba eqhweni obukhulu. Futhi-ke, izibani kanye imihlobiso! Bangu nakwezinye izindawo ukuthi imbangi isibonisi uzothola ezingxenyeni eziningi Europe.
Iyiphi indlela engcono ukuhlola amazwe ukudla ezahlukene kufanele anikele? Hlola Europe ngesitimela ngo-December, futhi nethuba ukuvakashela emadolobheni amaningi ngosuku olulodwa. Hlola sendawo emakethe fika Ungadla emuva esitimeleni! Ungase ube ibhulakufesi, Isidlo sasemini, lesidlo e 3 emadolobheni ahlukene!
Ithiphu: Ngo Switzerland futhi izingxenye eFrance, zama raclette futhi fondue, kokubili okuncike emhlabeni ushizi sekuqala ukufudumala. AmaJalimane uthanda phuma le inyamazane uma kubande, futhi chestnut okugazingiwe Uyi okuyisisekelo nomdayisi othile izimakethe kaKhisimusi. Ungakhohlwa oda uhlangothi mulled iwayini!
Ukulungele ukubhuka uhambo isitimela eliyingqayizivele? Omkhulu! Inhloko ku SaveATrain and enjoy hassle and booking-fee free Izincwajana zemininingwane travel!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/explore-europe-train-december/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#DecemberHolidays Christmas ChristmasbyTrain europetravel Ukudla holidayeurope longtrainjourneys Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi traveltips